बीस एलेवन वर्डप्रेस थीमको पावर | Martech Zone
सोमबार, अगस्ट 29, 2011 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
सप्तान्तमा मैले मेरो स्विच गरें WordPress विषयवस्तु फिर्ता बीस एघार। म इमानदारीपूर्वक भन्न सक्दछु कि मँ अब डिजाईनबाट खुशी छु। मैले यसलाई मेरो मनपर्ने अनुरुप बनाईएको छु र मैले कोड छुनु पनि पर्दैन। अब मलाई गलत नबनाउनुहोस्, त्यहाँ समयहरू छन् जब मँ एक थिम मा डाइभिंग गर्न र यसबाट बकवास ह्या ha्ग गर्न मनपराउँदछ, तर ब्लगिंग यति कठिन छ जस्तो यो छ। मलाई डिजाईन फीचर अप लाइनमा नलगाउने, वा त्रुटिहरूको त्रुटिहरू पुन: सुधार गर्ने सम्बन्धमा कुनै थप जोडको तान छैन किनकि केही डाटा सहि पार्स गरिएको थिएन। अब म ब्लगि onमा ध्यान दिन सक्छु।
बीस एलेभन विषयवस्तु सुन्दर र सरल मात्र छैन, तर मजबूत र अत्यन्त बहुमुखी पनि छ। यो वर्डप्रेस टोलीले बनाएको हो, जसको अर्थ हो कि मानिसहरू जो वर्डप्रेसको इन र आउटको पूर्ण रूपमा बुझ्दछन् र बुझ्दछन् उनीहरू सबैलाई शासन गर्न एक विषयवस्तु रचना गरेका छन्।
बीस एघार सुविधाहरू:
हल्का र गाढा रंग योजनाहरू
लिंक रंग परिवर्तन गर्नुहोस्
दुई-स्तम्भ, दायाँ साइडबार; दुई-स्तम्भ, बाँया साइडबार; एक स्तम्भ, कुनै साइडबार छैन
सात विभिन्न पोष्ट ढाँचा छनौट गर्नका लागि
पृष्ठभूमि छवि र / वा रंग परिवर्तन गर्नुहोस्
हेडर प्रदर्शन / लुकाउनुहोस्
विशेष छविहरू प्रदर्शन / लुकाउनुहोस्
यी सबै विकल्पहरू उपस्थित सब-मेनूबाट सम्पादन योग्य छन्।
विषयवस्तुका थप सुविधाहरू बाहेक, तपाईं पनि त्यस्तै पाउनुहुनेछ जुन तपाईं पूर्ण फिचर गरिएको वर्डप्रेस थीमबाट अपेक्षा गर्नुहुन्छ।
प्रति पोष्ट चित्रहरु
पूर्ण विजेट सक्षम
सुन्दर ढ n्गले नेस्टेड टिप्पणीहरू
एसईओ मैत्री, जब कि तपाइँ को उपयोग विचार करना चाहिए Yoast WordPress SEO जोड्नु
अन्तिम चीज तपाईलाई चाहिने भनेको थप गर्नु हो WP टच प्लगइन र तपाईं मोबाइलको लागि पनि तयार हुनुहुन्छ! मलाई मेरो साइटहरूको लागि पूर्ण उत्तम डिजाइन / विषयवस्तु खोज्ने भावना छ - पेशेवर र व्यक्तिगत। तपाईंको वास्तविक लक्ष्यको ट्र्याक हराउन यो सजिलो छ: ब्लगि!! बीस इलेवन एक हो मुक्त उपकरण जुन तपाइँ एक WordPress विषयवस्तु सिर्जना र प्रबन्धनको कष्ट हटाउन प्रयोग हुनुपर्दछ।
टैग: अटोरेस्पोन्डरबीएमडब्ल्यू लोगोडाटासिफ्टस्प्यामरहरू
डिसे 5, 2011 मा 11: 55 AM
म तपाईंसँग पूर्ण सहमत छु, तर २०११ विषयवस्तुमा एउटा कुरा हराइरहेको छ - यसले पोष्ट र पृष्ठहरूमा साइडबारलाई समर्थन गर्दैन, त्यसैले कुनै पनि समयमा यस समयमा ब्लग सेटअप गर्दा तपाईंलाई फेरि जानुपर्नेछ र एकल.पीपीपी र पृष्ठ सम्पादन गर्नु आवश्यक पर्दछ। .php फाईलहरू
मार्क्स 16, 2012 मा 8: 41 PM
के म भ्रमण गर्न सुझाव दिन सक्छु? http://www.borgyborgy.net यसले केहि नि: शुल्क १००० × २1000 पिक्सेल साइज हेडर प्रदान गर्दछ, पूर्वनिर्धारित ट्वानवेस्टिन थिमलाई अनुकूलित गर्न। ब्लग शुरुआतीहरूको लागि उपयोगी। यो तपाईं सजिलै एक मानक स्थापना अनुकूलन गर्न को लागी, एक नौसिखाहरु लाई केहि मिनेटमा अनुकूलित र तयार ब्लग गर्न अनुमति दिन्छ। सबै छविहरू म द्वारा लिइएको र क्रिएटिव कमन्स Lic.० लाइसेन्स अन्तर्गत प्रदान गरिएको हो।